The Fisherman's House - Natal - Beach - I-Airbnb
Barra de Tabatinga - PRAIA - Município de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, PRAIAS - RN, i-Brazil
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Marcelo
Itholakala ogwini oluseningizimu, le ndawo ijabulisa izivakashi ezifuna inketho ethule kakhulu nene-bucolic. Indlu yomdobi endala yalungiswa kabusha ngokuphelele ngemfudumalo nentelezi futhi kunoma yiliphi igumbi endlini uthola umuzwa wokuba solwandle.
Praia de Tabatinga. Ulwandle olusogwini oluseningizimu yesifundazwe i-Rio Grande do Norte (i-Pipa ne-Buzio), indawo ekhanga izivakashi ezifuna inketho ethule kakhulu ne-bucolic. Ilungele ukuntweza, i-kitesurfing, i-paragliding, nokudoba futhi imema ukuhamba ngezinyawo. Ungakwazi futhi ukubuka amahlengethwa nezimfudu zasolwandle. Amaminithi angu-30. kusukela ebhishi lasePonta Negra, eNatal.
Okwake kwaba yindlu yomdobi endala, manje sekuyindlu elungiswe kabusha izama ukugcina ukufudumala kwayo. Igumbi ngalinye (i-suite, igumbi lokudlela, igumbi lokugezela, ikhishi, igumbi lokuhlala, indawo yokuphumula kanye nengadi) linombono we-Atlantic Ocean, okukunikeza umuzwa wokuba solwandle futhi lapho ungajabulela khona i-ballet yamahlengethwa kanye nezimfudu zokuntywila. imvamisa.
Indlu iqukethe abantu abangu-3, ilungele umbhangqwana onengane noma umngane. Itholakala imizuzu engama-30 kuphela ukusuka eNatali futhi indawo ehlala abadobi ngokungangabazeki iyindawo yobuhle.
Naphezu kokuba namamitha-skwele angaba ngu-120, indawo yokuhlala yabadobi yayingaklanyelwe ukusiza abantu abaningi. Ine-suite enekhabethe kanye ne-balcony ebheke ulwandle. Indlu ilungele abantu abangu-3. Ihlala kamnandi umbhangqwana ophelezelwa ingane noma umuntu omdala wesithathu.
I-suite eyodwa enekhabethe kanye novulandi, ikhishi, igumbi lokudlela, igumbi lokuhlala, igumbi lokugezela elilodwa elengeziwe elineshawa, umpheme kanye nengadi enotshani. Zonke izindawo zinombono omangalisayo wolwandle.
Ifunwa kakhulu izivakashi zakwamanye amazwe kanye nabathandi bokudla, le ndlu itholakala kuphela ngamamitha angama-80 ukusuka endaweni yabadobi lapho ungathenga khona izinhlanzi ezintsha futhi uhlele uhambo lwesikebhe ukuya olwandle.
Amamitha ambalwa ukusuka endlini (uhambo lwemizuzu engu-15) kunombono wamaDolphins (Mirante dos Golfinhos), etholakala eweni elinikeza umbono omuhle wolwandle nezindunduma.
Uma uhamba ngasogwini lolwandle, imizuzu eyishumi nanhlanu nje ukusuka endaweni yabadobi, ufika ogwini olubizwa ngokuthi i-Praia de Camurupim, olwakhiwe izixhobo zamachibi namachibi emvelo futhi lulungele ukugeza. Uma uphansi kwamagagasi ungavakashela uPedra Oca, umhume ongaphansi kwezixhobo.
Kuso sifunda esifanayo ngaphandle kwesidingo semoto, ufika echibini elibizwa ngokuthi iLagoa de Arituba, elinye labaningi ahlakazeke kulo lonke idolobha laseNísia Floresta, elilungele ukugeza futhi elifakwe izintambo eziphezulu, ama-kayak namatende anokudla okulula nokudla kwasolwandle.
Ngokuqhubekayo, ugu lolwandle iPraia de Barreta nalo lakhiwe izixhobo zamachibi namachibi emvelo. I-Malembar indawo lapho ugibela khona isikebhe ukuze uwele ogwini lwase-Tibau do Sul, ePipa (25km ukusuka ekhaya) namanye amabhishi asogwini oluseningizimu. Ngaphakathi kwendawo ungavakashela idolobha lase-Nísia Floresta elijabulisa umhlaba wonke ngezihlahla zikakhukhunathi namasundu, ngokuvamile ashisayo!
Hlola ezinye izinketho ezise- Barra de Tabatinga - PRAIA - Município de Nísia Floresta namaphethelo